Akụkụ efere | Otu Di na Nwunye
June 11, 2019 + England, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Ezi ntụziaka, Akụkụ nke efere
Yorkshire Pudding ka okenye karịa United States - site na ọkara ma ọkara 40! Mgbe a na-ejikarị ọka wit mee ememe achịcha, achịcha, na pudding, osi nri na England nile echeputara ụzọ iji abụba nke na-adaba n'ime ite ahụ na-esi ísì mmiri ka anụ ahụ nọgidere na-eri. Ntụziaka, na mbụ a na-akpọ "dripping pudding" dị ka ọ bụ ... GỤKWUO
Mee 20, 2019 + British, England, Nri na ihe ọṅụṅụ, Ezi ntụziaka, Akụkụ nke efere, Onye anaghị eri anụ
Omenala British Bubble na Squeak
Bubble na squeak bụ omenala British nri ụtụtụ mere site pot pot na kabeeji. Na oge ndị a, ọ bụ efere nke na-adịghị emighị emeri, nke a na-esi na-eri nri na-eri nri site na nri abalị, ọ bụ ezie na ụba na-eri nri nke onye anaghị eri anụ emeela ka mgbochi omenala nke ejiji nke British. Ihe ndị bụ isi bụ nduku na kabeeji, ma carrots, peas, Brussels pulitere, na ... GỤKWUO
February 23, 2019 + Nri na ihe ọṅụṅụ, German, Germany, Ezi ntụziaka, Akụkụ nke efere
September 12, 2018 + Central America, Nri na ihe ọṅụṅụ, Mexico, Mexico, North America, Ezi ntụziaka, Akụkụ nke efere, omenala
Ot'u esi eme ka ezigbo weghachite agwa
N'ihe banyere ezigbo nri Mexico, nri ndị na-edozi ahụ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha. Ihe kachasị mmasị na kichin nri ọ bụla na-eri nri, ihe ndị na-edozi edozi abụghị "okpukpu abụọ e ghere eghe", ma n'eziokwu, akpọrọ aha aha ha, "frijoles refritos", na-asụgharị na "nke ọma". Achịcha ndị na-edozi anya na-atọ ụtọ mgbe nile site na burritos na fajitas, nanị iji wepụ ihe ndị na-acha na cheese na ... GỤKWUO